Sida looga hortago dacaayadaha doorashada inay gaaraan sanduuqaaga boostada | Wararka Gadget
Miguel Hernández | | General, Tababarada
Doorashooyinka sannadkan 2019 ayaa ka socda Spain, wax ka beddelka Sharciga Doorashooyinka intii lagu jiray 2018 wuxuu awood u siiyay nidaam u oggolaanaya muwaadiniinta ka diiwaangashan Machadka Qaranka ee Istaatistikada inay helaan xogtooda isla markaana aasaasaan joojinta dirista dacaayadaha doorashada. Iyadoo la adeegsanayo dacaayadaha doorashada waxaan tixraaceynaa waraaqaha ay xisbiyada siyaasaddu u diraan kuwa diiwaangashan ee soo jeedintooda iyo warqadaha codbixinta. Waxaan ku tusineynaa sida aad uga bixi laheyd diiwaangelinta si aan laguugu dirin dacaayadaha doorashada ee xisbiyada doorashooyinka guud. Si dhakhso ah oo fudud waad uga fogaan kartaa isticmaalka xad-dhaafka ah ee warqadda iyo balaastigga, keydka muhiimka u ah meeraha iyo tallaabada ka dhanka ah isbeddelka cimilada.
1 Waa maxay dacaayadaha doorashada?
2 Ma sharci baa inay iyagu ii soo diraan dacaayadaha doorashada iyaga oo aan codsan?
3 Maxaad ubaahantahay inaad ka saarto dacaayadaha doorashada
4 Sida looga baxo nidaamka dacaayadaha doorashada
5 Deegaanka ka caawi qorshahan
Waa maxay dacaayadaha doorashada?
Xisbiyada siyaasadu badanaa waxay bilaabaan ololahooda cod uruurinta bilo yar kahor doorashooyinka, sikastaba ha noqotee, ilaa iyo maalmo yar kahor codbixinta rasmiga ah ayay bilaabayaan inay u diraan "dacaayadaha doorashada" guryaha dadka diiwaan gashan.. Xisbiyada siyaasadeed sharci ayaa u aaneynaya awooda marin u helida Machadka Qaranka ee Tirakoobka, midka mas'uulka ka ah tirinta tirakoobka muwaadiniinta oo dhan iyo go'aaminta, iyo waxyaabaha kale, degaankooda. Sidaa darteed, dacaayaddan doorashada waxaa loo dirayaa cinwaanka ka muuqda INE.
Isla marka qof diiwaan gashan uu qaan gaadho oo uu yeesho awood uu ku codeeyo, iyo Marka la diyaariyo Tirakoobka Doorashada, oo cadeyneysa cida wax dooran karta iyo halka ay tahay inay u codeeyaan, waraaqaha dacaayadaha doorashada ayaa bilaabanaya inay yimaadaan. Boostadaani kama duwana farriimaha kale ee dadweynaha, marka laga reebo in xisbiyada siyaasaddu ay heli karaan xogteenna iyada oo aan loo baahnayn inaan bixino oggolaanshahayaga. Waa wax lala yaabo, maxaa yeelay tani waxay ka hor imaaneysaa Sharciga Ilaalinta Xogta ee hadda jirta, si kastaba ha noqotee, waa dabacsanaanta in muwaadiniinta qaarkood ay tahay faa'iido, sababtoo ah xaqiiqda ah inay si toos ah uga codeyn karaan guriga.
Ma sharci baa inay iyagu ii soo diraan dacaayadaha doorashada iyaga oo aan codsan?
Waxyaabaha u gaarka ah dacaayadaha doorashada ayaa ah inay noo timaaddo iyadoon loo eegin himilooyinkeena siyaasadeed, taas oo ah, waxaan ka helnaa buug yaraheena waraaqaha waraaqaha ee ka imanaya inta badan xisbiyada u taagan doorashooyinka, iyadoon loo eegin ujeedkeena siyaasadeed ama tooda. Si kastaba ha noqotee, Iyada oo laga jawaabayo cabashooyinka ururada qaarkood, 2018 saldhigyada lagama maarmaanka ah waa la beddelay si looga fogaado noocan dacaayadaha doorashada, Ku ilaalinta naftaada xuquuqaha helitaanka iyo toosinta xogteenna.
Siday doontaba ha noqotee, dacaayadaha doorashada ee boostada ayaa hadda la oggol yahay iyada oo maqnaanshaha oggolaanshaha degdegga ahi aanu ka imanaynin muwaaddinka, taas oo ah, xisbiyada siyaasaddu uma isticmaali karaan habab dijitaal ah sida SMS iyo emayl si ay u fuliyaan howlaha dacaayadaha doorashada. waxay siisay ogolaanshahooda si cad oo aan leex leexad lahayn, iyadoo la raacayo shuruudo la mid ah noocyada kale ee habraaca ka shaqeynta xogta. Marka la soo koobo, dacaayadaha doorashada boostada ayaa ah mida kaliya ee u baahan faragelinta muwaadinka in laga fogaado.
Maxaad ubaahantahay inaad ka saarto dacaayadaha doorashada
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan hubinno waa inaan haysanno qalab lagama maarmaan u ah inaan ka saarno nidaamka dacaayadaha doorashooyinka boostada boostada ee Machadka Qaranka ee Tirakoobka. Waa shuruud lagama maarmaan u ah in lagu fuliyo hawshan iyada oo loo marayo Xafiiska Elektiroonigga ee jidhkan, oo tan awgeed waxaan u baahan doonaa ugu yaraan mid ka mid ah labadan qalab ee aqoonsiga
Shahaadada Dijital ah ama DNIe
Markii aan hubinno inaan ku xaqiijin karno mid ka mid ah aaladahaas caanka ah, waxaan hubin doonnaa inaan howsha ku qabanno qalabka kombuyuutarka ee lagama maarmaanka ah. Shahaadooyinkani waxay la jaan qaadayaan inta badan nidaamyada hawlgalka, in kasta oo qaabeynta lagu taliyay ay tahay in la isticmaalo kombiyuutar leh Windows 7 wixii ka dambeeya iyo biraawsarka Internet Explorer. Sidan ayaan ku xaqiijineynaa inaan leenahay isku dheelitirnaan ugu badnaan, si kastaba ha noqotee, waxaan awoodnay inaan xaqiijino inay si sax ah ugu shaqeyneyso macOS iyo sidoo kale Mozilla Firefox iyo Google Chrome oo ah bog furayaal kale. Hadda oo aan hubinay inaan haysanno waxa ay qaadanayso si aan u awoodno inaan u fulinno hawsha ka-saarista nidaamka nidaamka dacaayadaha doorashooyinka, waa inaan qaadnaa tallaabooyinka soo socda.
Sida looga baxo nidaamka dacaayadaha doorashada
Raac tillaabooyinka fudud ee hoose ee aan kaaga tagayo hoose:
Waxaan galnaa bogga Machadka Qaranka ee Tirakoobka (LINK)
Markaad gudaha gasho, xaga kore waxaan xulanaa liiska "Tirakoobka doorashooyinka"
Hada dhagsii "Wadatashiga xogta diiwaangelinta ee Tirakoobka Doorashooyinka"
Liiska Tirakoobka Doorashada ayaa furmi doona, xagga sare waxaan ka tagi doonaa jiirka Nidaamyada> Nidaamka Tirakoobka> Ka-reebista nuqulada dacaayadaha
Markaan gujino xulashadan, meeniska u dhigma ayaa furi doona si aan ugu bilowno kalfadhi xaqiijinta micnaheedu waa inaan horay u qeexnay (DNIe - Shahaadada Dijital ah - Cl @ ve). Hadda waa goorta la furi doono nuqul ka mid ah arjiga oo kaliya waa inaan gujinnaa badhanka hoose ee ku calaamadeysan «U dir dalabka». Laga bilaabo xilligan, Machadka Qaranka ee Istaatistikada ayaa duubi doona diidmadayada in aan u oggolaanno xogtayada Tirakoobka Doorashooyinka in ay ka mid noqdaan nuqullada loo diro xisbiyada siyaasadda ujeeddadeeduna tahay in ay noo soo diraan waraaqo dacaayad siyaasadeed ah. Qaabkan fudud waxaan si fudud uga hortagi doonnaa nooc kasta oo dacaayadaha doorashada ah inay gaaraan guryaheena.
Deegaanka ka caawi qorshahan
In ka badan 370 milyan oo waraaqo dacaayad ah ayaa loo diraa muwaadiniinta illaa 60 milyan oo baqshad ahna waxaa laga heli karaa goobaha codbixinta. Codbixiyayaashan oo lagu sameeyay balaastik iyo warqado wax macno ah malahan xilligii isgaarsiinta iyo adduunka dhijitaalka ah, diidmada dacaayadaha doorashada waa hab fiican oo looga hortago wasakheynta, waxaana jira ilo badan oo loo baahan yahay marka inta badan codbixintaasi aysan dhalin dano dhab ah iyo waxay ku dambeeyaan qashinka dib loo warshadeeyo, sida ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida looga hortago dacaayadaha doorashada inay gaaraan sanduuqaaga boostada
Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro: Dhamaadka-dhamaadka waa la cusbooneysiiyay